Fanasokajiana ireo vokatra vita amin'ny seramika - YiXing International Logistics (GuangDong) CO., LTD
FBA LCL Amin'ny Ranomasina
Serivisy ampiana sarobidy ao Shina
Famindrana trano fivarotana any ivelany FBA
Miverina entana any Sina ny FBA, Serivisy fanodinam-bola any Sina
Fanovozan-kevitra momba ny vidiny
FBA Fandefasana FCL, LCL
Akanjo, fanasokajiana satroka
Any ivelany, Entana fanatanjahantena
Fanasokajiana Grill any ivelany
Fanasokajiana ny Keyboard
Fanasokajiana ireo boaty fitehirizana
Fanasokajiana ny vokatra vita amin'ny seramika
Fanasokajiana kojakoja haingo
Entam-tanimanga amin'ny alàlan'ny fandefasana entana any Etazonia FBA
Ramatoa Xu dia avy any Chaozhou, Provinsi Guangdong. Izy dia mpitantana ny e-varotra ho an'ny orinasa mpamokatra vokatra vita amin'ny seramika izay mivarotra kaopy, tavoahangy ary asa-tanana ho an'ny fanondranana manerana an'i Etazonia. Ramatoa xu vao haingana no nanolo-kevitra ny trano fitehirizan-tany Amazon handefasana entana iray fandefasana entana any Etazonia, noho izany "ny fandefasana am-baravarana amazon isam-baravarana" tamin'ny fikarohana baidu mba hahitana ny logistika YiXing Global, Ramatoa Xu mahita fa mifantoka amin'ny fandefasana andalana manokana ny orinasanay ireo mpandefa entana iraisam-pirenena, ao amin'ny tranokala etsy ambony ihany koa hijerena tranga marobe mifandraika amin'ny lojika, dia mifandraisa amiko hifandraisana, rehefa avy azoko ny zavatra takatra ary navelany ny mombamomba ny mpivarotra.
Vetivety dia niantso an'i Ramatoa Xu i Peggy, mpitantana ny logistika YiXing Global, hahalala ny mombamomba ny vokatra mifandraika amin'izany sy ny endrika manokana ny teti-pitaterana. Tamin'ny alàlan'ny fifandraisana dia fantatro fa Ramatoa Xu dia niara-niasa tamin'ny mpandefa maro talohan'izay. Noho ny antony maro samihafa, toy ny fetran'ny ora, ny fahasimban'ny vokatra no olana mahazatra indrindra, ka Ramatoa Xu dia manana ahiahy betsaka amin'ireo olana ireo, ary ny lafiny logistika YXL dia nilaza fa hitondra fitaterana ara-dalàna ireo entana ireo. , ary amin'ny fonosana vokatra dia soso-kevitra ihany koa ny handinika bebe kokoa, andramo ny fisorohana ireo fahavoazana ireo. Nilaza ihany koa Ramatoa Xu fa misy manodidina ny 15 metatra toradroa ny entana halefa any amin'ny trano fitobiana Amazon any Etazonia amin'ity indray mitoraka ity, izay mila hodiovina amin'ny ranomasina.
Izaho koa dia nanao teny nalaina araka ny habetsaky ny entan'ny Miss Xu, ary nampahafantatra ihany koa fa ny ora fandefasana any amin'ny trano fitehirizany Amazon any Etazonia dia tokony ho 24 andro. Ramatoa Xu dia efa nandalo entana taloha, ary mazava ny momba ireo vidin'ny fandaharam-potoana ireo. Rehefa avy nanao kaonty izy dia nanaiky mora foana ity drafi-pitaterana ity. Taorian'ny nanomezan-dRamatoa Xu ny fampahalalana mifandraika amin'izany dia nandamina avy hatrany ny mpamily hanangona ny entana aho ary nampahatsiahy ny mpamily mba hijery tsara ny fiarovana ireo entana. Aorian'ny fitaterana afovoany any amin'ny trano fivarotantsika ny entana, azo esorina ny entana raha vantany vao tonga ny daty fandefasana. Taty aoriana, ny logistics YiXing Global dia nanolotra fampahalalana logistika ara-potoana an'i Ramatoa Xu ihany koa, mba hahafantaran'ny mpanjifa tanteraka ny toe-draharaha amin'ny fitaterana entana ary hanaraka ara-potoana na inona na inona olana misy. Ity koa dia singa iray manan-danja amin'ny YXL Logistics hanomezana fahafaham-po ny mpanjifa rehetra.
Ny vidin'ny fandefasana entana amerikana an'ny logistika YiXing Global dia tena nifaninana tokoa satria nifantoka tamin'ny fitaterana amerikana izahay ary manana traikefa miasa mihoatra ny folo taona amin'ny fitaterana zotra-amerikana manokana. Ka na inona na inona ilanao ranomasina FCL, LCL, filan'ny fitaterana entana betsaka dia afaka mifanaraka amin'ny zavatra takinao amin'ny fitaterana azo antoka sy mahomby izahay, avelao ianao hatoky tena!
Raha mila izany ianao, pls mifandraisa aminay amin'ny tsipika fandraharahana: +86 17322126273 (Peggy Zhang)
Adiresy: 4 Houjie Xihuan Road, GangKou Avenue, DongGuan, Sina
Inona avy ireo antony misy fiatraikany amin'ny Amazon ...
Ny vidin'ny serivisy fiverenana Amazon FBA dia ...
Ahoana no hanafoanan'i Amazon ny mpanjifa tsy voaloa ...
FANONTANIANA momba ny asa